Ungaziva Sei Mikana yeSEO Pane Saiti Yako Kuvandudza Chinzvimbo Mukutsvaga Zviwanikwa Uchishandisa Semrush | Martech Zone
Ungaziva Sei Mikana yeSEO Pane Saiti Yako Kuvandudza Chinzvimbo Mukutsvaga Zviwanikwa Uchishandisa Semrush
Chishanu, February 19, 2021 NeChishanu, Kurume 5, 2021 Douglas Karr
Kwemakore, ini ndakabatsira mazana emasangano nekuvaka kwavo zvemukati marongero uye kugadzirisa kwavo kwese kutsvaga injini kuoneka. Maitiro acho akatwasanuka kumberi:
mutambo - Ita shuwa kuti yavo saiti inoita mushe zvine chekuita nekumhanyisa.
mudziyo - Ita shuwa kuti yavo saiti ruzivo rwakakwirira pane desktop uye kunyanya nhare.
branding - Ita shuwa kuti yavo saiti inokwezva, nyore kushandisa, uye inogara yakamisikidzwa nezvakanaka uye mutsauko.
gutsikana - Ita shuwa kuti vane raibhurari yezviri mukati inosanganisira danho rega rega renzendo dzevatengi vavo, uye vanoshandisa ese masvikiro mune rakarongedzwa peji.
Dana-Ku-Chiito - Iva nechokwadi chekuti vanopa vashanyi zvekuita zvinotevera pane peji rega rega uye nechinhu chimwe nechimwe chemukati.
ushambadzi - Ita shuwa kuti vane nzira inoshanda yekuona kuti zvinyorwa zvavo zvakagovaniswa online kuburikidza nevezvenhau, zvemhando yepamusoro madhairekitori, indasitiri, uye masosi anokurudzira.
Tsvagurudzo haisi yekungogadzira zvemukati chete, ndezve kuburitsa zvemhando yepamusoro zvemhando yepamusoro tichienzanisa nevanokwikwidza.
Ndivanaani Vari Kutsvaga Kwako Vanokwikwidza?
Iwo ungaratidzika semubvunzo usinganzwisisike, asi vakwikwidzi vako pamainjini ekutsvaga haasi iwo chete makambani ane zvinokwikwidza zvigadzirwa nemasevhisi. Vanokwikwidza paminjini yekutsvaga ndeaya:
Maindasitiri mawebhusaiti iyo inokwikwidza iwo mamwe mazwi akakosha uye inogona kusundira traffic kune vako vanokwikwidza.
Online Dhairekitori ane chinangwa chega kuronga chinzvimbo chiri nani kupfuura iwe kuti ungamanikidzwa kushambadza navo.
Referensi mawebhusaiti saWikipedia vane chinzvimbo chekutsvaga chinoshamisa.
Nhau mawebhusaiti izvo zvinogona kukwikwidzana newe pamatemu ako akapiswa nekuda kwesimba ravo rekutsvaga injini.
Dzidzo mawebhusaiti izvo zvinogona kuve nemakirasi kana makosi pane akafanana misoro. Dzidzo saiti dzinowanzo kuve nesimba rakatanhamara futi.
evanhu vezvenhau masaiti ari kuyedza kushingairira pamwe neako anogona vatengi kuitira kuti iwe ugone kumanikidzwa kushambadza navo.
Kufuridzira mawebhusaiti ayo ari kushingairira kuita nevatengi vako vanogona kuti vagotengesa kushambadzira kana kuita nevanobatana.
Nyaya iripo, Martech Zone anokwikwidza zvachose nevakawanda vanopa veMartech kana zvasvika pakurongwa uye traffic. Kuti ndiite mari yangu saiti, ini ndinofanirwa kukwikwidza uye kuhwina pane anonyanya kukwikwidza uye akakwirira-traffic traffic mazwi. Pandinoita izvozvo, vanhu vazhinji vanozobaya kushambadziro pane yangu saiti kana mahukama ehukama - kutyaira mari. Uye kazhinji, chinzvimbo changu chinotungamira kumakambani anotsigira zvakatumirwa nezvikamu kuti vaedze uye kutyaira zvimwe zvinotungamira kwavo.
Iwe Unowana Sei Kwako Kutsvaga Kwevakwikwidzi?
Kunyangwe iwe uchigona kufunga kuti iwe unogona kungo tsvaga uye kuona kuti ndiani anouya mune mhedzisiro, iyo haisi nzira huru yekuziva kuti vakwikwidzi vako ndivanaani. Icho chikonzero ndechekuti injini dzekutsvaga dzinoisa pachako yekutsvaga injini mhedzisiro mapeji (SERPs) kumushandisi wekutsvaga - zvese kumusoro uye nenzvimbo.
Saka, kana iwe uchinyatsoda kuona makwikwi ako - iwe unofanirwa kushandisa chishandiso senge Semrush iyo inounganidza uye inopa ungwaru uye kuburitsa kwakatenderedza mitsva yekutsvaga injini.
Semrush inogona kukubatsira kuti uone mashandiro anoita domasi rako pamazwi akakosha uye nekukubatsira kuti uone maburi nemikana mukugadzirisa kwaungaita chinzvimbo chako chakanangana nemakwikwi ako.
Nhanho 1: Tarisa Kumusoro Kwako Domain's Chinzvimbo neKiyi kiyi
Nhanho yekutanga yandinotora kana ndichiita kukwikwidza kutsvagisa ndiko kwandakatomira. Icho chikonzero cheichi chiri nyore zvakapusa… zviri nyore kwandiri kukwidziridza uye kusimudzira kumusoro pamusoro pemazwi akakosha andinoisa pane atova pane kuyedza kurongedza pamazwi akakosha ayo saiti yangu isingawanikwe.
Mafirita andinoshandisa anosiyana:
nzvimbo - Ini ndinotanga nenzvimbo 4-10 sezvo ini ndatova papeji 1 uye kana ndikakwanisa kusvika panzvimbo 3, ndinoziva kuti ndichawedzera zvakanyanya traffic yangu.
Musiyano Muchinzvimbo - Ini ndinoda kutarisa pazvinzvimbo pandiri kutowedzera huwandu hwangu mwedzi nemwedzi nekuti zvinoreva kuti zvemukati zviri kuwana chiremera uye ndinogona kukwirisa uye kusimudzirazve kuti zviendese mberi.
vhorumu - Kana mavhoriyamu ari mumakumi kana mazana ezviuru, ini ndinogona kukwidziridza iwo mapeji asi ini handizotarisira mhedzisiro. Nekuda kweizvozvo, ini ndinowanzo tarisa kwekutsvaga mavhoriyamu pakati pezana ne100 ekutsvaga pamwedzi.
Nyaya Yekudzidza PaKugadziridza Iyo Yekutsva Peji
Iwe unozoona kuti ndakafambira mberi Zuva reValentine Contest. Ndiro raive izwi rakakosha randakashanda pamwedzi wapfuura ndichigadzirira Vashambadzi vaive vachiita tsvagurudzo pamakwikwi enhau enhau… uye zvakashanda! Ndakagashirwa zviuru zvekushanya nekugadzirisa chinyorwa chekare uye nekuzorodza iyo data nemifananidzo irimo. Ini ndanga ndatogadziridza iyo post slug kuti ive nani kunongedza iwo mazwi akakosha, ndichichinja "valentines-zuva-mushandirapamwe" kuenda ku "valentines-zuva-social-media-media-makwikwi".
Gore rakapera, ndakagashira dzinosvika makumi maviri neshanu kubva kunjini dzekutsvaga pakati paKukadzi wa27 na1. Gore rino, ndakagashirwa 15 kubva kunjini dzekutsvaga. Iko kuwedzera kwakanaka kwe organic traffic yekushandurwa kudiki mune zvemukati zveiyo peji.
Nhanho 2: Ziva iro Keyword Mukana
Izwi rekutanga pane irwo runyorwa chairo chiratidzo, saka handina chivimbo chekuti ndiri kuenda pachinzvimbo zvakanaka kana kuhwina iwo traffic. Kana paine munhu arikutsvaga Acquire.io… vangangoda iyo chaiyo webhusaiti.
Nekudaro, iro rechipiri kiyi - raibhurari yezvinyorwa - ndiyo imwe yandinonyatsofarira chinzvimbo chiri nani pairi. Iyo yakakosha kune yangu bhizinesi masevhisi uye ini ndine shungu yekubatsira vashambadziri kuti vanyatsoita basa uye vabudirire ne kwavo zvemukati kugadzirwa kutyaira kushambadzira mhedzisiro.
ZANO: Ko iro peji ratove renzvimbo pane dzakabatana mazwi?
Usakanganwa kuti iwe unogona kunyatso kukuvadza yako yakazara yekutsvaga traffic kana iwe ukatora yepamusoro-chinzvimbo peji uye ukanganisa iko kwayo kwayo kweiyo chaiyo kiyi kiyi. Nekudaro, chinhu chechipiri chandinoita ndechekuona chii chimwe icho chakatarwa peji peji nekudzvanya pane iyo URL iri mu Semrush chirevo. Ini ndinobvisa mafirita angu ese ndobva ndarongedza rondedzero yacho nechinzvimbo.
Saka… izvi zviri kutaridzika zvakanaka. Ndichiri chinzvimbo che chivakwa uye kusika raibhurari yezviri mukati, zviri pachena kuwana chinzvimbo changu pamusoro raibhurari yezvinyorwa ndichafambisa yakawanda traffic kune yangu saiti.
Cherechedzawo zvakare, mu SERP maficha kuti pane zvakaratidzwa zvidiki, mavhidhiyo, uye ongororo. Ini ndoda kuona kana ini ndakapinza chero chinhu chinogona kubatsira mune yangu chinyorwa icho chatove chikamu.
Nhanho 3: Ziva Yangu SEO Vanokwikwidza
Kana ini ndikabaya raibhurari yezvinyorwa mukoramu yekutanga, ini zvino ndogona kuona kuti vakwikwidzi vangu vari mumapeji ekutsvaga enjini yekutsvaga:
Nhanho 4: Enzanisa Zvemukati Zvako Nezvazvo Zvemukati
Ndichishandisa maSERP maficha kubva kumberi uye kuongorora rimwe nerimwe remapeji aya, ini zvino ndogona kuuya nemazano ekuti ndingaite sei kuvandudza zvemukati mangu kuti ndive indexed zvirinani raibhurari yezvinyorwa, pamwe nekutsvaga mimwe mikana yekuti ungasimudzire sei kutyaira mamwe ma backlinks ... ayo anozopedzisira andiisa pachinzvimbo chiri nani.
Ini chaizvo ndine akawanda backlinks kune peji rangu kupfuura akati wandei emapeji ari pamusoro pangu. Ehezve, mamwe eaya madomeni ane masimba akakurisa saka ini ndakatemerwa basa rangu. Chinyorwa chepamusoro-soro pane iro peji rinoratidzika kunge chakanyorwa muna2013, saka ndinotonyanya kuvimba kuti ndinogona kutyaira mimwe mibairo iri nani. Uye, mukuongorora runyorwa rwezvinyorwa… zvimwe zvacho hazvitomboenderana nezwi rakakosha zvachose.
Nhanho 5: Natsiridza Zvemukati Zvako
Ngatizvitarisei ... chinyorwa changu hachisi chikuru… saka inguva yekunyatso chisimudzira. Mune ino kesi, ndinotenda ndinogona:
Gadzirira iyo musoro wenyaya yechinyorwa.
Isa chinonyanya kumanikidza inoratidzwa mufananidzo izvo zvinotyaira traffic yakawanda kubva pasocial media kukurudzira.
Add a Video kwandinotsanangudza zano rese.
Wedzera zvimwe madhayagiramu mukati mechinyorwa.
Pinza zvimwe umboo kutenderedza rwendo rwevatengi uye kuti zvemukati zvinofambisa sei kubatikana uye shanduko.
Mune ino kesi, ini ndinotenda kusimudzira zvirimo uye kuigadzirisazve pasocial media zvakaringana chaizvo kufambisa zvirinani kutsvaga mitsva. Mafungu matsva evanhu vanoverenga zvemukati uye nekugovana nazvo pamhepo zvinopa zviratidzo kuGoogle kuti zvirimo zviri pamusoro, zvitsva, uye zvinofanirwa kuverengerwa zvirinani.
Nhanho 6: Dzokororazve uye Simudzira Zvemukati Zvako
Kana chinyorwa chako chiri pane yako blog, usatya kutya kudhindisa zvirimo senge nyowani, uchichengeta iyo imwechete URL uye slug. Nekuti iwe watoverengerwa, haudi kuchinja iyo URL peji rako!
Uye, painongobuditswazve, iwe uchazoda kugovera uye kusimudzira zvirimo kuburikidza neyako email tsamba, masiginecha emaimeri, uye mune ako ese enhau enhau.
Nhanho 7: Tarisa Wako Ongororo Uye Semrush!
Ini ndinowanzoona kukurumidza kukurumidza mukushanya pakudhindisa patsva uye kusimudzira zvirimo asi kwete shanduko nekukasira mune chinzvimbo chepamusoro. Ini ndinowanzo shanyirazve Semrush in 2 kune vhiki dze3 kuona kuti shanduko dzangu dzakakanganisa sei huwandu hwese hweiyo chaiyo URL.
Iri zano rekukunda randinoshandisa vhiki nevhiki kune vatengi vangu… uye zvinoshamisa kuti rinoshanda sei.
Tanga Ne Semrush!
Kana iwe uri wakakomba nezvekushandisa zvemukati kutyaira organic kukura, ita chokwadi chekutarisa Semrush's Zvemukati Zvekushambadzira Toolkit kwaunogona kuronga, kunyora, uye kuongorora zvemukati zvako zvese munzvimbo imwechete.
The Semrush Zvemukati Zvekushambadzira Platform inopa dzakasiyana siyana mhinduro dzekuvandudza rakabudirira zvemukati zano uye kugadzira zvemukati zvinopa vateereri vako. Sanganisa kugona uye analytics padanho rega rekufambisa kwako.
Yangu Yakagadziriswa Peji Peji Ramba Zvirinani? Tsvaga Izvo Mune Yangu Yekutevera-Chinyorwa!
Semrush yakadzokororwa uye yavo keyword database rakakura kubva pa17.6B kusvika 20B. Makore maviri apfuura aingo sanganisira 2B mazwi - ndiko 10x kukura! Vakagadzirisawo zvirongwa zvavo:
Pro - maFreelancers, ekutanga, uye vari-mumba vashambadzi vanoshandisa iyi package kuti vakure yavo SEO, PPC, uye SMM mapurojekiti.
Edza Semrush Pro Yemahara!
mudzidzisi - Bhizinesi diki uye ekushambadzira masangano anoshandisa iyi package. Iyo ine ese epro maficha kuwedzera kune izvo zvemukati zvekushambadzira chikuva, nhoroondo dhata, uye Google Data Studio kusangana.
Edza Semrush Guru Yemahara!
Business - MaAgency, e-commerce mapurojekiti, uye makuru masosi anoshandisa iyi package. Inosanganisira kupinda kweAPI, yakawedzera miganho uye sarudzo dzekugovana, uye Kugovana kwekuzivisa kweIzwi.
Nyorera kune Semrush Bhizinesi
Kuzivisa: Ini ndakabatana ne Semrush uye ndiri kushandisa yavo yehukama link mune ino chinyorwa.
Tags: zvemukati zvinongororwamaitiro ekuvandudza chinzvimbomaitiro ekutsvagisa vakwikwidzi pamhepoorganic mikana yekutsvagainjini yekutsvagatsvaga injini peji pejizvawanikwasemrushiyo kuongororaseo kukwikwidza kuongororaseo mikanachinzvimbo